'कसरी एउटा भुस्याहा कुकुरले मेरो जीवन सदाका लागि फेरि दियो' - BBC News नेपाली
लुसीसँग इसबेल टर्कीमा
समुद्रमा २२० किलोमिटर पर कुकुर भेटिएपछि...
आन्टाल्या जाने क्रममा घाम ताप्दै लुसी
"तपाईँ जस्तो चाहनुहुन्छ म त्यस्तै बन्न सक्छु," मैले भने। "खराब कुराहरू भइरहेको छ।" मैले ममाथि के भयो त्यो भनेँ। उहाँले यतिमात्रै भन्नुभयो त्यो मेरै गल्ती हो र मैले परिवर्तन हुनुपर्छ।
२१ वर्षको उमेरमा मलाई घरविहीनहरूको आश्रय स्थलले पनि निकालिदियो। त्यहाँ काम गर्ने एकजना मुख्य महिला म सधैँ दुर्दिनमा हुनेछु भनेर कराउँथिन्। उनमा केही थियो- उनले त्यो भनेपछि मलाई सोच्न कर लाग्यो। "म त्यो हुन दिन्नँ।"
इसबेल र इरानी महिला साइकल टोलीका अरू सदस्य
मेरो लागि मनोबल उच्च राख्नु एकदमै गाह्रो थियो। तर म अकस्मात् केवल 'सुपरवुमन' मात्रै भइनँ म जहाँ थिएँ त्यहाँबाट घस्रिएर बाहिर पनि निस्किएँ।
तेहरानमा मलाई इरानी टोलीका लागि खेल्ने प्रस्ताव आयो। मलाई लाग्यो, "त्यो मेरा लागि आफ्नो बुवा र त्यो देशसँग जोडिने मौका हो।" त्यसैले मैले स्कटल्यान्डमा कमनवेल्थ गेम्समा छानिनका लागि समय खर्चिनुभन्दा इरानकै लागि खेल्ने निधो गरेँ।
बोलिभियाली एल्टिप्लानोमा इसबेल
इसबेलले साइकलमा एक्लै २० वटा देशको भ्रमण गरिसकेकी छन्
म विश्वभ्रमण गर्दैथिएँ - गल्लीको कुकुरसँग के गर्नु थियो र?
कुकुर पछिपछि आइरहेको थियो, तर उसको आकृति टाढा हराउँदै गयो। एकछिनपछि मलाई लाग्यो, "यो गलत हो, इसबेल।" मैले ब्रेक दबाएँ।
अन्तत: कुकुरले मलाई भेट्यो, एक मिटर पर बस्यो। मैले मेरो हात अघि बढाएँ, तर ऊ केही पर नै बस्यो।
मनजिकै बस्ने ठाउँ खोज्न निस्किएँ र उसले मलाई पच्छायो।
त्यसको भोलिपल्ट म उसलाई उसको गाउँ फर्काइदिने सोच्दैथिएँ तर उसलाई कुकुरहरूको हुलले आक्रमण गर्‍यो।
म त्यस्तै थिएँ, मानिसहरूलाई ममाथि अन्याय गर्न दिन्थेँ।
सबै कुरा धमिलो भयो। मैले मेरो साइकल फालेँ र चिच्याउन थाले, र मलाई नै थाहा नभएको शक्ति मैले महसुस गरेँ। कसरी कसरी मैले तिनीहरूलाई भगाएँ।
म केही पाइलापछि हटेँ र लुसीका लागि रुन थालेँ। तर साँच्चै म आफ्ना लागि रोइरहेकी थिएँ।
मैले सबै कुरालाई रोकेर जीवन बाँचिरहेकी थिएँ र यो त्यतिबेला के भएको थियो भन्ने महसुस गर्ने क्षण थियो।
यात्राको त्यो हिस्साले केही परिवर्तन गर्‍यो - यो शक्ति, यो आत्मसम्मान, यही कुकुरबाट प्राप्त भयो।
म एकदमै फरक भएँ। म अब पीडित थिइनँ। मैले सोचिरहेँ, "मैले आफैँलाई जोगाउन नसकेका बेला यो कुकुरलाई कसरी जोगाए?"
मैले त्यतिखेर मात्र सोचेँ, "वाह इसबेल, तैँले जे हासिल गरिस् त्यो साँच्चै अपत्यारिलो छ।"
इसबेलको पुस्तक 'म, मेरो साइकल र भुस्याहा कुकुर लुसी' यूकेको ब्र्याड्ट ट्राभलले प्रकाशित गरेको छ। अमेरिकी अङ्क भेलोप्रेसले प्रकाशित गरेको हो।
उनी worldbikegirl.com र ishbelholmes.com मा ब्लग लेख्छिन्।
वरुणत्से हिमाल: कुकुर पनि पुग्यो सात हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमशिखरमा
थाईल्यान्डमा समुद्रको बीचबाट तेल खानीका कामदारले गरे कुकुरको उद्धार
के चीनको शून्य कोभिड नीति सफल छ
उत्तर कोरियाले अहिले किन धेरै क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिरहेको छ